‘चंगा चेट’को गीत हार्डडिक्सबाट चैट ! « Ramailo छ
‘चंगा चेट’को गीत हार्डडिक्सबाट चैट !
प्रकाशित मिति : Jun 20, 2018
फिल्म ‘चंगा चेट’ को गीत बुधबार सार्वजनिक नहुने भएको छ । प्राविधिक गडबडीका कारण फिल्मको बुधबार साढे १ बजेलाई राखिएको प्रेसमिट समेत स्थगित हुन गएको छ । निर्देशक दिपेन्द्र के.खनालले यसबारे क्षमा मागेका छन् ।
‘चंगा चेट’को गीत राखिएको हार्डडिक्स क्र्यास भएपछि निर्माण पक्षले तोकेको समयमा गीत रिलिज गर्न असमर्थ हुँदै प्रेसमिट रोक्न बाध्य भएको हो । ‘हामी फाइल रिकभर गर्ने प्रयासमा छौं’, निर्देशक खनालले दुःखी हुँदै भने, ‘रिकभर भएपछि रिलिज गर्नुपर्ला । हामीलाई घाटा लाग्यो ।’ कार्यक्रम नहुँदा हल भाडा र खाजा खर्च व्यर्थमा खेर गएको छ ।
‘गोजीमा दाम छैन’ बोलको गीतमा प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज जोशी, पारमिता राज्य लक्ष्मी शाह, सन्दिप क्षेत्री, सुरक्षा पन्त र रविन्द्र झा फिचरिंग छन् । निर्माता माधव वाग्ले भने फिल्ममा प्रयोग गरिने नक्कली नोट प्रकरणमा पुरपक्षका लागि थुनामा छन् । ‘चंगा चेट’ भदौ १५ गते प्रदर्शन हुनेछ ।